रेबिजको उपचार नपाउँदा गर्भवतीको मृत्यु |
रेबिजको उपचार नपाउँदा गर्भवतीको मृत्यु
प्रकाशित मिति :2016-07-03 15:09:19
बाजुरा । भूस्याहा कुकुरले टोकेर रेबिज लागेकी बाजुरा जिल्ला बाधु गाविसकी एक गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको छ । रेविजको उपचार नपाएर बाधुकी २३ वर्षीया माया आउजीको मृत्यु भएको कोल्टि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका डा. बिकल लामछिानेले वताउनुभयो । पाँच महिनाकी गर्भवती माया आउजीलाई गाँउकै भुस्याहा कुकुरले टोकेको थियो ।
कुकुरले टोकेको केहीदिनपछि कोल्टि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारका लागि लगिएको थियो । त्यहाँ रेबिजविरुद्ध लगाउने खोप र अन्य उपचार नभएपछि जिल्ला अस्पताल बाजुरामा रिफर गरेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका डा. लामिछानेले वताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘डेढ महिनाअघि उनी उपचारका लागि आएकी थिइन्, हामीले जिल्ला अस्पतालमा जान सुझाव दिएका थियौं ।’ तर, जिल्ला अस्पताल बाजुरामा पनि खोप र उपचार सम्भव नभएपछि आर्थिक अभावले उपचारकालागि अन्य अस्पतालमा लैजान नसक्दा उनको मृत्यु भएको मृतकका आफन्तले बताएका छन् ।
अहिले कोल्टि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दमा रेविजविरुद्धको खोप र औषधि आएको छ, उनी आउँदा खोप र औषधिको अभाव रहेको केन्द्रका प्रमुख लामिछानेले वताउनुभयो । ‘त्यतिखेर भएको भए उनलाई बचाउँन सकिने थियो’ उहाँले भन्नुभयो ।
कोल्टि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दुई महिनायतामात्र कुकुर टोकेका २५ जना भन्दा बढी उपचारका लागि आएका छन् । एक महिनाअघि पनि कुकुरले टोकेकी एकजना महिलालाई रेबिज देखिएपछि काठमाडौं रिफर गरेको केन्द्रले जनाएको छ । छाडा कुकुर र स्यालले मानिस र चौपायालाई टोकेर गाँउमै आतंक फैलाएको गोत्री स्वास्थ्य चौकीका ईन्चार्ज जितेन्द्र यादवले वताउनुभयाे ।
बाजुराको उत्तरी क्षेत्रका अधिकांश गाविसमा कुकुरले टोकेर स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गर्न आउनेको संख्या निकै भएको स्वास्थ्यकर्मी वताउँछन् । गाँउमा भुस्याहा कुकुर र स्यालले मानिस र चौपायालाई टोक्ने समस्या भएको, तर नियन्त्रणका लागि कतैबाट पहल नभएको स्थानिय डबल विक वताउनुहुन्छ ।
माया आउजीको परिवार आफूले उब्जाएको बालीले ३ महिना पनि खान नपुग्ने गरिव परिवारमा पर्छन् । गरिवका लागि सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा घोषणा गरेको छ । तर जिल्लामा भने गरिवले उपचार नपाएर अकालमै मर्ने गरेका छन् । सरकारको यो घोषण कागजमामात्र सिमित भएको नागरिक समाजका शेर बहादुर शाही बताउनुहुन्छ ।